Najib iyo Mohamad Irwan Serigar Abdullah, oo ah xoghiyiihii guud ee hore ee lacagta ayaa waxaa maanta lasoo taagey maxkamd ku taalla magaalada Kula Lumpur, halkaasi oo lagu soo bandhigay lix kiis dacwadeed oo ku saabsan dambiyo la xiriira inay ku xadgudbeen mas’uuliyadooda.
Labada nin ayaa waxaa lagu eedeeyey inay xadeen qeyb ka mid ah lacag loogu talo-galay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kuala Lumpur iyo lacag kaash ah oo lagu caawiyo dadweynaha, intii u dhaxeysay December 2016 illaa December 2017.
Mid kasta oo ka mid ah eedeymahan ayaa lagu muteysan karaa 20 sano oo xabsi ah. Labada ninba waa ay beeniyeen eedaha loo soo jeediyey.
Najib ayaa sidoo kale wajahaya 32 kiis dacwadeed oo la xiriira fadeexad ka dhalatay sanduuqa maaliyadda dadweynaha ee dowladda ee loo yaqaan 1MDB. Waxaa la rumeysan yahay inuu 10 milyan kala baxay sanduuqaas, kuna shubtay sanduuq banki oo isaga uu leeyahay.
Lacagtaas ayaa aad u yar marka loo eego 4.5 bilyan oo dollar, oo Waaxda Cadaaladda Mareykanka ay ku eedeysay Najiib iyo dadka ku xiran inay kala baxeen sanduuqa 1MDB.